र विजेता हो ... - व्यक्ति - TELES RELAY
र विजेता हो ... - मान्छे
By TELES RELAY On डीसी 19, 2019
Olympia de Grèce : la princesse très sexy pour une soirée entre…
मट्टेओको भित्र: लन्डनको सबैभन्दा भव्य रेस्टुरेन्ट
मेघन मार्कल: यो जिज्ञासु प्रविधी जुन उनीले प्रयोग गर्छिन् ...
(एकीकृत) https://www.youtube.com/watch?v=1EszZi2yT54 (/ एकीकृत)
तीन महिना जंगली पोशाक, विवादास्पद उन्मूलन पछि, कहिलेकाँही उत्कृष्ट प्रदर्शन र आदम लेविनको फिर्तीको लागि दुखद चाहना, "द भ्वाइस" को सत्र १ 17 ले उनलाई मंगलबार बेलुका बोलायो।
र जब दुई घण्टाको पफि फिनाले एनबीसीमा समाप्त भयो, स्पटलाइटमा एक्लो गायक थियो ...
हाम्रा सबै बधाई @JakeHootMusic! तपाईं र अन्य फाइनलिस्टहरू यस मौसममा आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ। भविष्य तपाईका सबैलाई के राख्छ भनेर हेर्न म पर्ख्न सक्दिन 🎵🎉# आवाज#TheVoiceFinale https://t.co/GwwtxkQAle
- याकूब Emery (@TheJacobEmery) 18 डिसेम्बर 2019
केट क्लार्क्सनको प्रशिक्षक रहेको एक देशी गायक हूटले उपाधिका लागि रिकी दुरान (टीम ब्लेक शेल्टन) लाई हराए। केटी कडान (टीम जोन लेजेन्ड) तेस्रो र रोज शॉर्ट (टीम गोवेन स्टेफानी) चौथे स्थानमा रहे।
यो क्लार्क्सनको लागि प्रशिक्षकको तेस्रो विजय हो जसले पहिलो प्रतिस्पर्धी ब्रायन कार्टेलीसँग सीजन १ won जित्यो र त्यसपछि सीजन १ won मा प्रतिस्पर्धी चेभेल शेफर्डको साथ जित्यो।
टेनेसीको कुकभिलका 31१ बर्षे निवासी हूटका लागि विजय कुनै ठूलो आश्चर्यको कुरा थिएन। उनले श्रृंखला (एप्पल संगीत) मा सबैभन्दा प्रसारण कलाकारको प्रतिष्ठा कमाएका थिए र नियमित रूपमा आकर्षक र सान्दर्भिक प्रदर्शनहरू प्रस्तुत गर्थे। क्लार्क्सन, एक कट्टरपन्थी भए पनि, उहाँलाई "हात तल, फाइनल को सर्वश्रेष्ठ गायक" भन्छन्।
तर हूटले आफूलाई प्रशंसक मनपर्नेको रूपमा स्थापित गर्नु अघि प्रारम्भिक धारणाहरू पार गर्नुपर्‍यो। अन्धा श्रोताहरूको बखत उनले आफ्नो एक मात्र प्रशिक्षक क्लार्कसनलाई बोलाए। र पहिलो हप्तामा, उसले बरु "लजालु" चरण उपस्थिति को प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो।
हूट, तथापि, theतु बढ्दै जाँदा आराम र दृढ भयो, र ईगलको "डेस्पेराडो" को उनको भावनात्मक कभरेज एप्पल संगीत साइटमा पहिलो स्थानमा आइपुगे। उहाँको उत्कट समर्थकहरूको समूह - मायालु "Hooters" को रूपमा चिनिन्छ - गणना गर्न एक शक्ति भएको छ।
उनको विजयले देशका गायकहरू - र दक्षिणका उम्मेदवारहरू - "आवाज" मा अविश्वसनीय सफलता जारी राख्दछ।
हूटको जन्म टेक्सासमा भएको थियो, तर उनको मिसनरी अभिभावकहरूले family बर्षको उमेरमा परिवारलाई डोमिनिकन रिपब्लिकमा सारिदिए। त्यहाँ बसोबास गर्दा, उनले स्पेनी धाराप्रवाह बोल्ने क्रममा गितार गाउन र बजाउन थाले। २० वर्षको उमेरमा उनी टेनेसी बसाइँ सरे जहाँ उनले कन्सर्ट गर्न सुरु गरे जहाँ टेनेसी टेक युनिभर्सिटीमा फुटबल खेलाडीको रूपमा भाग लिएका थिए।
बुधवार दुई घण्टाको फाइनल, सामान्य रूपमा, ठूला नामहरूले प्रदर्शनले भरियो। पूर्व कोच जेनिफर हडसन कालो आँखा मटर, ल्यूक कम्ब्स, लेडी एन्टेबेलम, लिटिल बिग टाउन, दुआ लिपा र सत्र १ winner विजेता मैलेनको साथ भ्वाइसमा फर्किए।
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) मा देखा पर्यो mercurynews.com
जेलमा MHD कसरी गर्छ? - भिडियो
बारिया-रियल: दुई पेनाल्टीहरू बिर्सिए, आधिकारिक गुनासो खस्नेछ - FOOT 01
ग्रीसको ओलम्पिया: केटीको साँझको लागि धेरै सेक्सी राजकुमारी
मेघन मार्कल: यो जिज्ञासु प्रविधिको कि उनी एक हवाईजहाजमा प्रयोग गर्छिन्
राजकुमारी चार्लोट: वास्तविक कारण केट र विलियमले नाम छनौट गरे ...